Difaac naftaada marwalba marka aad FX | FXCC Blog
Aug 13 Qiimaha Ganacsi ee Forex, Faallooyinka Suuqa • 1000 Views Comments Off on Difaaca naftaada marwalba marka aad ku ganacsaneyso FX
Waxaa jira isboorti koox gaar ah oo difaaca uu muhiim u yahay weerarka, ama “dembi” sida ilma adeeradeenna Mareykan ay doorbidayaan inay ugu yeeraan. Kubadda cagta waxaa nalooga tegi lahaa madadaalo iyo neefsasho la'aan haddii Barcelona iyo Manchester City ay ciyaaraan ciyaar ah ciyaar loo yaqaan '6-5' iyadoo xoogga la saarayo dhanka weerarka iyo banaanka. Laakiin kuwa da 'yarta ah ayaa sidoo kale jeclaan lahaa ciyaar u dhaxeysa Real Madrid iyo Juventus oo leh qirasho difaac oo ku dhamaaday 1-0.
Gelinta garsooraha wuxuu badiyaa adeegsadaa weedha ah “iska ilaali marwalba” madaama uu u gudbiyo tilmaamadiisa ugu dambeysay labada feeryahan, ka hor inta aysan dib ugu laaban gees kooda si ay u geliyaan gaashaanta gaashaanka. Si la mid ah sida kuwa daahirku u bogaadinayaan waxqabadka daafaca ee naxdinta leh ee kubbadda cagta, daawashada feeryahan heer sare ah oo kubbadda garaacay laakiin aan lagu dhufan, maadaama ay xoogga saaraan dhinaca daafaca ee isboortigooda, waxay noqon karaan wax lagu farxo in la daawado.
Waxaa xiiso leh in la xuso in tartamayaasha elektaroonigga ah ee hada loo tixgeliyo inay yihiin ciyaartooy, inta badan ciyaartoydan da 'yarta ah ee wiilasha ah, kuwaas oo u ciyaaro ciyaaro dalxiis ah dhagaystayaal aad u tiro badan labadaba barta internetka iyo garoomada ayaa bilaabay inay kormeeraan: cuntooyinkooda, ladnaantooda, socodsiinta jimicsiga iyo farsamadooda ciyaarta. . Waxba ugama harin fursad, waxay iyagu naftooda siinayaan fursadda ugu fiican ee la heli karo si loogu guuleysto abaalmarinta weyn ee hadda la heli karo. Waxay sidoo kale horumariyaan istiraatiijiyad ciyaaro oo ay xoogga saaraan ilaalinta ilaa inta weerarka.
In kasta oo ganacsiga 'forex' aan loo qaddarinin isboorti aad u tartan badan sida e-isboorti waxaa jira waxyaabo isku mid ah oo siyaabo badan FX u ganacsigu waa hawlo tartan. Shaki la'aan waxaad ubaahantahay inaad lahaato wax qabad, caqli wanaag iyo tartan tartami ah si aad u guuleysato. Waa inaad sameysataa gardarro la xakameynayo, suuqa uusan ku siinaynin inaad qaadatid. Waa inaad sidoo kale barataa sida loo difaaco naftaada marwalba si loo hubiyo in lagaa ilaaliyo dhaawacyada suuqa.
Guusha ganacsiga Forex si lama filaan ah uma imaan doono, waa in laga shaqeeyaa, waxaad u baahan doontaa heerar muhiim ah oo tamarta si horumarka iyo faa iidada joogtada ah ee bangiga. Waxaad ubaahantahay inaad sameysato istiraatiijiyad maskaxda lagu weerarayo adoo taxadar adag siinaya difaaca, waxaad sidoo kale ubaahantahay inaad si dhakhso ah u barato sida loo ilaaliyo lacagta akoonkaaga ganacsiga markasta.
Ciyaar-yaqaan heersare ah ayaa si buuxda u ogaanaya inay dharbaaxo ku qaadi doonaan tartamadooda, laakiin waxay si joogto ah u xusuusiyaan halista ay ku qaadi doonaan markay qorsheynayaan inay qarxiyaan naftooda. Sidoo kale, ganacsade khibrad leh oo FX ah ayaa og in laga yaabo inuu ka soo baxo xirfadaha 10 kaliya 6 ay noqon doonaan kuwa guuleysta, mid ka mid ah qodobbada guusha ee muhiimka ah waa in la hubiyo in lacagta bangi lagu siiyay guuleysteyaashu ay ka badan tahay lacagta kaa luntay lumiyaashaada, qaanuunkan fudud ee fudud ayaa kuu xaqiijin doona Marwalba faa'iido ayaan lahaan doonaa. Marka sidee naftaada u difaaci kartaa mar kasta markaad si firfircoon uga ganacsato suuqyada?
Tixgeli had iyo jeer inaad la ganacsato isbeddellada halkii aad adeegsan lahayd habab ganacsi oo is-weydaarsi
Waxaa loo aqrin karaa sida hab fudud oo waa. Haddii aad tahay ganacsade maalinle ah markaa ma adkaanayso in la garto haddii isbeddel maalinle ah uu ku jiro ciyaarta. Suuqa nabadgelyadu wuxuu noqon doonaa mid u sarreeya ama isbeddelaya, marka si sahlan loo eego qiimaha ayaa noqon doona mid kor u sii kacaya, hoos ama dhinac socda. Haddii qiimaha uu yahay mid wareegaya mashiinka maalinlaha ah ee loo yaqaan 'pivot point' waxaa laga yaabaa inuu dhinac u socdo, haddii qiimaha uu ka sarreeyo heerka ugu horreeya ee iska caabbinta, R1, markaa waxay u badan tahay inuu ka sii ganacsado isbeddellada hadda jira, ama horumarinta isbeddel cusub. Qaadashada xirfadaha jihada dariiqa jira ayaa ah inay had iyo jeer yareyso suuragalnimada inaad khasaare u geysato.
Ku ilaali raasamaalkaaga joogsiyo, xaddidaadaha maalinlaha ah iyo dariiqyada adag
Ganacsi kasta oo aad qaadatid waa inaad heysataa qorshe aad uga baxeyso jidka joogsiga iyo bartilmaameedka macaashka ama xadida amarka. Waa inaad kaliya halis gelisaa xoogaa yar oo koontadaada ah ganacsi kasta. Waa inaad dejisaa xaddiga khasaaraha maalinlaha ah oo macquul ah ka hor intaadan qiran in maanta istaraatiijiyadiinu aysan waafaqsanayn dhaqanka suuqa. Waa inaad sidoo kale dejisaa heerka isku-dhafka kaas oo haddii jebinta ay kugu dhiirrigelineyso inaad dib ugu laabato guddiga-sawirka oo aad dib u fiiriso istiraatiijiyadda aad hadda ku jirto, ama aad u abuuri lahayd hab iyo istiraatijiyad cusub.
« Sida loo adeegsado istiraatiijiyad waqti-go'an badan marka la ganacsanayo FX Sida cabsida noocyadeeda kala duwan ay saameyn ugu yeelan karto ganacsigaaga »